गाउँले वातावरणमा छोराछोरीसँग घुम्न मन छ तर, जुरेको छैन –सञ्चिता लुइटेल « Mero LifeStyle
नेपाली चलचित्र जगतकी चर्चित अभिनेत्री हुन्– सञ्चिता लुईँटेल । घुमघाममा निकै रुचि राख्ने लुइटेल फूर्सद हुने बित्तिकै परिवारसँग घुमघामको योजना बनाई हाल्छिन् । नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र विभिन्न राष्ट्रमा घुमिसकेकी अभिनेत्री लुईँटेलसँग मेरोलाइफस्टाइलले गरेको घुमघाम वार्ताः
अहिलेसम्म कहाँ–कहाँ घुम्नु भयो ?
नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली टुर गरेकी छु । चार–पाँच वर्ष अगाडि एक–एक महिना पूर्व झापा र पश्चिम (रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दाङ, सुर्खेत) गएको थिएँ । भारत, भुटान, चीज, मलेसिया, दुबई, कतार, जापान, बेल्जियम, थाइल्याण्ड लगायत देश घुमेकी छु ।
पोखराजति गए पनि जाउँ–जाउँ लाग्छ । भारत, भुटान, चीन, मलेसिया, दुबई, कतार, जापान, बेलजियम, थाइलेन्ड लगायतका राष्ट्रहरु मेरो घुमघाम गन्तव्य हुन् । तर, अहिले त कोरोनाले गर्दा घरभित्रै थुनिनुपरेको छ । बसिरहिएको छ ।
नयाँ वर्ष, परिवार र साथीहरुको जन्मदिनको मौका पारेर घुम्न जान्छु । कामबाट फूर्सद निस्कियो भने पनि पोखरा वा नजिकको ठाउँ परिवारसँग गइहाल्छु ।
सल्यान जाँदा आँगनमा सुकुल बिछ्याएर गाउँभरका मान्छेहरुसँग बसेर टेलिभिजन हेरेको एकदमै रमाइलो लागेको थियो । त्यो समयमा साँधेको गुन्द्रुक, भोगटे र मकै एउटै भाँडाबाट खाँदै टेलिभिजन हेरेको कुरा मेरो लागि अविस्मरणीय छ ।
परिवारका सबै सदस्य काममै व्यस्त हुनुुहुन्छ । परिवारका सबैसँगै बस्दा महिनाको एक दिन घुम्न जाने योजना बनाइथ्यो । तर कोरोना आएपछि खासै योजना बनाइँदैन । कुनैदिन विशेष परिकार बनाएर घरको छतमा परिवार बसेर खाने र रमाइलो गर्ने गर्छौँ ।
घुमघाममा निस्कँदा के–के बोक्नुहुन्छ ?
पिक्नीक जाँदा घरमै बनाएको खानेकुरा, टेन्ट, म्याट, ब्याडमिन्टन, बल, खेलाउनाहरु, पानी र गिटर जस्ता सामानले मेरो परिवारलाई पुग्छ । साथै, लामो यात्राको लागि निस्कँदै छु भने आफूलाई आवश्यक पर्ने सामानहरु बोक्छु ।
तपाईंले अरुलाई घुम्न जानका लागि सिफारिस गर्नुपर्यो भने कुन–कुन ठाउँ गर्नुहुन्छ ।
अहिलेको समयमा यो ठाउँ घुम्नुस् भन्न चाहन्न । तर, काठमाडौँ उपत्यकामा नै भएकाहरु परिवारसँग रमाइलोका निम्ति नगरकोट, धुलिखेल, हात्तीवन र कुनै खुल्लाचौरमा जान सक्नुहुन्छ । यसैगरी कसैलाई मन्दिर मनपर्छ भने मनकामना, चन्द्रागिरी, दक्षिणकाली जान सक्नुहुन्छ । यसका साथै जनकपुर, पोखरा र हिमाली क्षेत्रका ठाउँहरु पनि रमाइलो छ ।
रुची केमा छ, के गर्दा रमाइलो लाग्छ त्यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो । प्रकृतिसँग, होटल, रिसोर्ट, पौडी र खेलहरु के गर्दा आनन्द आउँछ त्यही अनुसार घुम्नुपर्छ । हालको समयमा परिवार के कुरामा रमाउँछ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । बाहिर जाँदा जसले जे आउँछ त्यही सुनाउने, चित्त दुखेका कुराहरु खोल्ने, परिवारिक गफगाफ गर्ने गर्दा रमाइलो हुन्छ ।
घुम्न मन लागेको तर जान नसकेको ठाउँ चाहिँ कुन–कुन हुन् ?
नेपालमै भएका हिमाली क्षेत्र, विगट ठाउँहरु रुकुम, रोल्पा र गाउँले वातावरणमा छोराछोरीसँगै घुम्ने मन छ तर, जुरेको छैन ।
नेपालको राजनीतिक पाटो अस्थिर भएको कारणले पर्यटन वा घुमघामको विकास कम भएको जस्तो लाग्छ । जबसम्म देशको राजनीति स्थिर हुँदैन तबसम्म यस क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुन गाह्रो छ । अहिले कोरोनाका कारण सबै होटेल व्यवसायहरु बन्द छन् । ती ठाउँहरु स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ती सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । घुमघामका लागि सहज वातावरण बनाउनु पर्छ ।